Pogba oo ka warbixiyay SADDEX ciyaaryahan uu xili kasta isku dayo inuu wax ka barto – Gool FM
Pogba oo ka warbixiyay SADDEX ciyaaryahan uu xili kasta isku dayo inuu wax ka barto
(Manchester) 18 Jan 2019. Xidiga khadka dhexe reer France iyo kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa wuxuu ka hadlay saddex ciyaaryahan uu xili kasta doonayo inuu wax ka barto
Pogba ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mirror” ee dalka England wuxuu kaga hadlay arintan wuxuuna yiri:
“Waxaan haatan daawadaa Kevin De Bruyne, Luka Modrić iyo Toni Kroos, waxaan jeclahay inaan wax ka barto iyaga, taasina waa wax aniga ii fiican”.
“Hadii aan si daacadnimo u hadlo, waxaan jeclahay kubada cagta, waxaana jeclahay inaan daawado ciyaartoyda, waxaa laga yaabaa in dadka ay arintaas la yaabaan”.
“Markii aan yaraa, waxaan daawaday ciyaartoyda weerarka, haatan waxaan ahay ciyaaryahan khadka dhexe ah, waxaan daawadaa ciyaartoyda sida anigoo kale ah”.
“Waxaan wax ka bartay xidigaha Yaya Touré, Iniesta, Xavi, Paul Scholes iyo Michael Carrick, waxaan xili kasta jeclahay daawashada ciyaartoyda, si aan u noqdo Paul Pogba ee heysta sifooyinka ugu fiican ee macquulka ah”.
Ugu dambeyn Pogba ayaa wuxuu ka hadlay macalinka ku meel gaarka ah ee kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjær wuxuuna yiri:
“Wuxuu si aad ah ugu dhow yahay ciyaartoyda, taasna mar walba waa faa’iido, waxaa suuragal ah inuu ku fahmo, wuu kuu imaanayaa wuuna kula sheekeysanayaa, taasina waa sababta uu xiriirka u fiican yahay”.
Tababare Sarri oo ka hadlay Sheekada Higuain iyo Chelsea.....(Maxaa ka jira wararka sheegaya inay Sabtida kala hortagayaan Arsenal??)
HORDHAC: Liverpool v Crystal Palace